Nhau - Yepasi rose okisijeni inogadzirisa musika musika kupupura kukura kusinga tsindike pamusoro pe 2018-2026
Pasi rose saizi inosimudza musika saizi yekupupurira kukura kusiko pamusoro pe 2018-2026
Selbyville, Delaware, Chivabvu 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Zvinoenderana nehunyanzvi mazwi, musika wepasi rose wekutengesa okisijeni unofungidzirwa kuratidza kukura kwakakura pamusoro peiyo iri kuuya, nekudaro ichiunganidza mari zhinji panosvika gore ra2026. Iyi yekuwedzera maitiro mugumisiro wezviitiko zviri kuwedzera yezvirwere zvekufema.
Kupfuurirazve, chirevo chinoongorora musika uyu zvine chekuita netekinoroji nzvimbo, chigadzirwa chigadzirwa, uye chiyero chevashandisi, nekudaro ichipa ruzivo nezve chikamu cheindasitiri chakachengetwa nechikamu chimwe nechimwe uye kuratidza nzvimbo dzinobatsira dzekudyara kweramangwana. Zvakare, pfupiso yakadzama yemisika yedunhu inotsanangurwa mugwaro, padivi nenzvimbo yemakwikwi inosimbisa pazvinhu zvakakosha senge chigadzirwa chekambani, mari yavo, kubatana, kuwanikwa, uye chikamu cheindasitiri.
Nezve rekodhi, oxygen inogadziriswa inoshandiswa kuendesa okisijeni-yakafumisa gasi kuyerera nekubvisa nitrogen kubva kunobva rwizi (kazhinji mhepo iri mukati) uye kuwedzera kuwanda kwe oxygen. Ivo anonyanya kushandiswa kupa ekurapa okisijeni kune varwere vanotambura neakaderera eropa oxygen mazinga.
Kuwedzera kwehuwandu hwevanhu vane hunyanzvi avo vanowanzo tenderwa nemamiriro akashata ehutano, uye kuwanda kwekuputa fodya pakati pevanhu kuchasimudzirawo kudiwa kwevanokanganisa oxygen. Zvakare, murwere anofarira kumba-based oksijeni kurapa, mukubatana nehunyanzvi hwekufambira mberi mumunda vakagadzirira kuwedzera epasi rose oxygen concentrators indasitiri maonero.
Kune rakadzika, okisijeni concentrators anonyanya kudiwa, zvichivaita zvisingakwanisike kune vepakati-boka revanhu, iro pamwe pamwe neyakaomarara mutemo mamiriro muhutano hwekumira yakatwasuka inosvibisa iwo wese musika kukura.
Kunyorera zvikamu zvemusika:
Kubva pane tekinoroji terrain, musika unoverengerwa mukuenderera kuyerera, uye kupisa moyo. Mhando dzakasiyana dzeokisijeni inogadzirisa inowanikwa muindasitiri inotakurika, uye inogadziriswa. Kunyange zvakadaro, akasiyana-siyana ekupedzisira-mushandisi anogadzira mari ndeyekuchengetwa kwemusha, zvipatara, nevamwe.
Chirevo chinochera zvakadzama mumaitiro emudunhu nemasimba ekufanofungidzira huwandu hwakazara hwenzvimbo yepasirese inogadzirisa oksijeni indasitiri pamusoro pe2018-2026. Akasiyana majografi akaongororwa iJapan, United States, uye EU5 (United Kingdom, Spain, Italy, France, uye Germany).
Bhizinesi bhizinesi rinoratidza kukwikwidza kwakanyanya. Makambani akasimbiswa ari kugara achiisa mari akananga kuR & D kusiyanisa yavo portfolio pamwe nekukudza kwavo kugona kugona. Maitiro akadai sekushandira pamwe nekudyidzana, kuwanikwa & kubatanidzwa, uye mari zviri kuiswa nemakambani kuchengetedza nzvimbo yavo mumusika uye kuwedzeredza mari yavo.
Post nguva: Chivabvu-21-2021